Uyenza njani eyam iDogecoins (Ukufakwa kunye nokusetyenziswa) | Ukusuka kwiLinux
Uyenza njani eyam iDogecoins (Ukufakwa kunye nokusetyenziswa)
UIvanLinux | | Izifundo / iincwadi / Iingcebiso
Las zemali Baye baba yimfashini mvanje, ezona zidumileyo zezi:
Kodwa siza kugxila kwenye ngokukodwa:
1.1 Kutheni kuvakala ngathi meme kum? ee
2 Ukombiwa kwemigodi kwiLinux (kucetyiswa ukuba isetyenziswe kwiinkqubo zeX64):
3 Imayini kwi-Android:
Kutheni kuvakala ngathi meme kum? ee
Ngenxa yokuba isekwe kwi-Intanethi eyaziwayo ye-Intanethi «DogeYiyiphi inja Shiba nina. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga notyelelo lwemali: Unyango Wikipedia
Ukombiwa kwemigodi kwiLinux (kucetyiswa ukuba isetyenziswe kwiinkqubo zeX64):
Emigodini kufuneka sifake ezi zixhomekeke zilandelayo:
Kwi-Ubuntu okanye kwiziphumo (mhlawumbi iya kusebenza kwi-Debian):
Sikhuphela iphakheji kunye ne-SRC:
Unzip i .tar.gz:
Ngenisa ifolda ye-cpuminer-2.3.2:
Qalisa ukumbiwa kwemigodi!:
Kuya kufuneka ubeke endaweni «umsebenzisi» «umsebenzi» kunye «negama eligqithisiweyo, koku siya kule webhusayithi ilandelayo kwaye sibhalise: Iphepha loBhaliso
Nje ukuba sibhalise, kufuneka siqhubeke nokuqinisekisa iakhawunti yethu nge-imeyile eya kuthi ifike kwiakhawunti yakho. Nje ukuba iakhawunti iqinisekiswe, singena.
Uya kuzifumana kwiDashboard, apha siza kungena kwicandelo laBasebenzi baM, ngaphakathi kwaBasebenzi bam siya kudala uMsebenzi onegama kunye negama lokugqitha olifunayo. Nje ukuba kwenziwe oku, siqhubeka nokumisela lo mthetho ulandelayo:
Sifaka "umsebenzisi" endaweni yomsebenzisi obukade ubhalisa kuye kwi-nut2pools, "umsebenzi" ngegama loMsebenzi esimenze ngaphambili kunye ne "password" ngegama eligqithisiweyo loMsebenzi HAYI lomsebenzisi.
Ilungile! Sele unemigodi, ungabona isixa se I-Dogecoins imbe kwiDashboard
Imayini kwi-Android sinokufaka usetyenziso olulandelayo kwiVenkile yokudlala:
Nje ukuba sifakelwe siye kule webhusayithi ilandelayo kwaye sibhalise: Iphepha loBhaliso
Uya kuzifumana kwiDashboard, apha siza kungena kwicandelo laBasebenzi baM, ngaphakathi kwaBasebenzi bam siya kudala uMsebenzi onegama kunye negama lokugqitha olifunayo.
Nje ukuba kwenziwe oku, sivula iDroidMiner.
Kwi- «Imayini yePhuli ye-URL» sibeka:
Kwi "Username" ubeka igama lomsebenzisi lephepha obubhalise kulo ngaphambili, ixesha kunye negama loMsebenzi owenzileyo, Umzekelo: umsebenzisi.worker
Kwi «Igama eligqithisiweyo» igama eligqithisiweyo loMsebenzi HAYI lomsebenzisi.
Kwi «1», khetha inani leempawu ezineselfowuni yakho.
Khetha ukhetho «LTC / DOGE / XPM» kwaye uchukumise «Qala»
Ugqibile, unemigodi! ungasibona isixa se I-Dogecoins imbe kwiDashboard
Kukho ukubakho kwezimbiwa zeDogecoins kwi-Windows yeWindows, kodwa kuba le bhlog yiSoftware yasimahla, asiyibeki inkqubo. 😉
I-Pss idilesi yam ye-Dogcoins 🙂 DAQVhckjg72YsLWXTGUqzu46gbH9Phcq79
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izifundo / iincwadi / Iingcebiso » Uyenza njani eyam iDogecoins (Ukufakwa kunye nokusetyenziswa)
Unomdla kwesi sihloko seeMali eziSebenzayo. Kuba andazi kwanto ngezoqoqosho, andiqondi ukuba banokuba nexabiso elinjani.
Ndandihlala ndiva ngeBitcoins, kodwa ndiyabona ukuba zininzi ezinye iindlela .. Kuya kufuneka ndimbe nzulu kulo mbandela ukuze ndibone ukuba kunjani.
Ndifumanisa ukuba "ukumbiwa kwemigodi" kunomdla kakhulu. Ngaba ayinasiphelo? Ndingayenza imali ngokungapheliyo?
Ithiyori inemida. Inqaku lelokuba inqaku lifikelelwe apho imali ingasenako "ukudalwa" ngaphandle komoya obhityileyo.
Phendula kwi diazepan
Kule mihla zonke iimali, ngokuqinisekileyo okanye hayi, zixabisa kuphela into kuba kukho abantu abakholelwa ukuba kufanelekile, kwaye bayamkela intlawulo ngemali ethile kuba bakholelwa ukuba le mali izokwamkelwa ngomnye umntu ukuze abanike elungileyo okanye inkonzo. Uqikelelo oluchanekileyo, wow.
Nali inqaku elilunge kakhulu elichaza ukuba loluphi uncedo oluphambili lweemali zesiko ngaphezulu kwezi zibonakalayo:
"Baxabisa into ethile kuba kukho abantu abakholelwa ukuba ixabisa into ethile, kwaye bayayamkela intlawulo ngemali ethile kuba bekholelwa ukuba omnye umntu uza kuyamkela loo mali ukuze abanike into elungileyo okanye inkonzo"
Yhoo! Ngokuchanekileyo kufana neengqekembe zokwenyani ...
Akukho namnye olandela imigangatho yegolide, okanye enye. Oovimba abasekwe kubo (imithombo yabo "yokuzithemba") zezinye iimali "ekuthiwa" zinamandla ...
«Namhlanje zonke iimali, virtual okanye hayi ...»
UHector Quispe sitsho
Okwangoku zonke iimali zibonakala. (inyani ayisiyoyekhompyutha kuphela)
Phendula kuHector Quispe
Ukumba umgodi kuyafana nokusebenza kwengqekembe. Unika inxenye yesikhundla sakho sekhompyuter kunethiwekhi ye-cryptocurrency, ukuze ikwazi ukwenza ishishini layo, kwaye ekubuyiseni bakubhatala ngaloo mali. Ubuncinci yile nto ndiyiqondileyo.
Molo u-Elav, ezazifudula zisisixa semali ezixabisa intsimbi ezazenziwe ngayo kunye nokuxutywa kweso sinyithi kungakhokelela kubhengezo kwilizwe lonke kunye noqhushululu oluninzi. Emva koko, ezi ngqekembe zaqala ukusekwa kumgangatho wegolide, into ethetha ukuba ingqekembe nganye "ixabisa iX peso yegolide" kodwa ukusukela ngeengxaki zeoyile zango-1973 (xa wawungumntwana xD 😛) ezi ngqekembe akufuneki zibenexabiso Ixhaswe nganto, zonke ziyintelekelelo kwaye "bayazithemba ukuba ilizwe elikhuphayo liya kukuhlawula." (Oku kakhulu, ngasentla kakhulu kwaye andikucebisi ukuba ufunde kwi-wikipedia kuba sonke esi sihloko sibhalwe njenge-esile).
Kuba uqoqosho luphela ngoku lusekwe kwidola, i-United States ingazixhasa ngeendleko zokuxabisa imali yayo ukuhlawula oko ikutyalayo. Oko kuqhele ukubizwa ngokuba "kukushicilela amatikiti." Nangona kunjalo, njengoko zonke ezinye iimali zixhomekeke kwidola, banyanzelekile ukuba bathambise ixabiso ukuze bangabizi kakhulu kwimarike. Ukukunika umbono, i-EU, iJapan kunye ne-US bebeshicilela amatyala iminyaka kunye neminyaka bengayekanga ngenxa yokuba bezama ukugcina imali izinzile ... kodwa ngenye imini oku kuya kuqhuma kwaye uzakulahla kuphela eCuba ngenxa yokungabi noqoqosho njengemarike enjalo (kwaye iya kukuchaphazela ngokuqinisekileyo).
Ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Ukumbiwa kwemigodi kunokumbiwa kwinto efakwe kwi-algorithm yemali, ekuqaleni ezininzi ziveliswa ngezixhobo ezimbalwa kunye nezixhobo ezininzi nangaphezulu, umda uyanda kancinci kancinci.
Akukho mali ine-endorsement yokwenyani kodwa iyintsomi, ndithetha ukuzithemba onakho kwilizwe elikhutshileyo okanye umbutho. Idola kumashumi eminyaka ayilandeli imigangatho yegolide kunye nabanye.
Ndiyathemba ukuba andizukuzenza iimpazamo kubuchwephesha.
Akunjalo njengokuba usitsho, iimali njengomgaqo jikelele zisekwe kwinto ethembekileyo eyenziwe luqoqosho lwelizwe, kodwa ixabiso lilawulwa nangurhulumente, umzekelo ocacileyo kuxa u-Obama waxelela umongameli wase-China ukuba ahambe ukwehlisa ixabiso lemali ukuthanda ukuthunyelwa kwelinye ilizwe, okanye kwa into enye neVenezuela ngokwenza ixabiso lemali. Omnye umzekelo ocacileyo kukuba phakathi kwengxubakaxaka kwindawo ye-Euro, ireyithi yotshintshiselwano nge-Euro yawela kwizinga lembali, yonke into isekwe kukuzithemba okuveliswe ngummandla okanye ilizwe, kunye nenkxaso yezoqoqosho.
I-Bitecoins isekwe ngokulula nokuba ingaba abasebenzisi bayayifuna na okanye hayi, umdla abawubekayo kubo awufani nemali yokwenyani.
Kuphela ngamathandabuzo amabini: 1) Ialgagisms esiza kuzisombulula ukufumana ezi Dogecoins zisetyenziselwa ntoni? 2) Ngaba kukho ujongano lomzobo we KDE?
Ukuba bayasebenza, benza izinto ezininzi ... phanda 😀
kwaye ndiyazibuza ukuba kutheni ufuna ujongano lomzobo?
Wowu! Imali eninzi, isityebi
Kudala ndenza umgodi weeDococoins okwethutyana, kodwa ndisebenzisa i-cgminer endaweni ye-cpuminer (ndisebenzisa ithuba lokuba ndine-AMD GPU: D) [iingqekembe ezininzi, zityebe kakhulu, zininzi kakhulu ze-crypto]. Ukuba uyafuna, ndingacacisa ukuba ungayenza njani eyam indlela.
Ngendlela, awuyazi indlela elula yokuba nesipaji se-Dogecoin kwi-linux ngaphandle kokukhuphela kunye nokudibanisa ngqo kwi-Git? Ndinqwenela ukuba kubekho indawo yokugcina izinto ... Ah yima, unqamle ngaphandle, ndifumene indawo yokugcina i-XD https://launchpad.net/~cwayne18/+archive/doge
Yinto emnandi ukufumana imali "ngaphandle kwendawo", kodwa xa kuthelekiswa nemali yesiko ayixabisi kangako ... Ekuphela kwento umntu anokuyithemba kukuba i-cryptocurrency iyakuxabisa okanye ... ulinde iimali zesintu ukuba zehle. Ndilinde nje usuku apho singasayi kuxhomekeka kuhlobo oluthile lwemali ukuze siphile (okanye ukuba ii-cryptocurrensets kuphela kwazo ezinexabiso lokwenyani).
Ngokombono wam njengombonisi, zonke iimali zanamhlanje, nokuba ziyintoni na, zibonakala kum ngathi zixhasa ngakumbi kuqoqosho nakwimveliso yelizwe okanye yeqela, ke i-United States evelisa kwaye ingenisa impahla ngokukhawuleza okukhulu Inzala ixabiseke kakhulu ngokuba yintengiso evelisa ingeniso
Elinye inqaku okanye umbuzo ophakama kum, zingaphi iivenkile ezikwi-Intanethi ezithengiweyo ezilolu hlobo lwemali? Ndingawuthengaphi umzekelo kunye neeDogecoins?
Ayizizo iivenkile onokuzithenga nge-dogecoin .. Isitshixo kukutshintsha iDogegoin ye-Bitcoin kwaye emva koko uyazi .. Nokuba uthenga ezivenkileni ngeBitcoins okanye uzidlulisela kwiakhawunti yakho yebhanki: D.
Unokuguqula i-Dogecoin iye kwi-Bitcoin apha: https://bter.com
Yeyona endiyisebenzisayo ngaphandle kwengxaki 🙂
Nantsi into enye elahlekileyo .. Faka isipaji se-dogecoin kwindlela yakho. Kungenxa yoko le nto ndibeka isifundo ...
Uhlaziyo lwe-sudo apt&& I-libboost-program-options4-dev libboost-thread4-dev libboost-chrono4-dev yokwakha-kubalulekile i-git
Kwaye voila 😀
I-zypper kwi-libopenssl-devel yokunyusa amandla-devel git libdb-4_8 libdb-4_8-devel libqt4-devel
Ngaphambi kokubeka umyalelo kufuneka uguqule i-MAKEFILE. Kwinxalenye ye-INCPATH, yongeza esiphelweni somgca: -I / usr / include / db4.8
Ngendlela yokubaleka kweDebian kunye "nokumbiwa kwemigodi" 🙂
Ukuba neengqekembe zemali kwi-pc yakho hayi kwi-intanethi
UJavier Yañez sitsho
Uyayazi loo nto xa usenza imiyalelo
-e intetho # 1, uphawu 1: i-odolo engaziwayo: " "
kwaye xa ndenza "yenza" ndiyifumana le:
*** Akukho njongo ichaziweyo kwaye akukho fayile ifunyenweyo. Phezulu.
Phendula kuJavier Yañez
Andazi oku ngokukodwa, kodwa inqaku kukuba iBitcoins ngokukodwa sele isiya kwi-SLI ukuya kuthi ga kumakhadi ama-4 ukuba andifundanga ngokuchanekileyo kuba iingxaki zezibalo ziyavela kwaye kuya kusiba nzima kwiPC ukuzisombulula ... uluvo Iindleko zehardware kunye nexesha elichithwe kwinkqubo alikho ngaphezulu kwexabiso layo nayiphi na imali oza kuyifumana.
Le ngxaki isonjululwa yi-PPC
Ngomyalelo wokugqibela ndifumana oku:
"./Minerd: impikiswano engasetyenziswanga yokhetho 'umsebenzisi.worker: iphasiwedi'
I-PS: Ndithathe indawo "yomsebenzisi" wegama eligqithisiweyo kunye "nomsebenzisi", kodwa ngokucacileyo andikwazi ukuzipapasha. Kwenzekani?
Uqinisekile ukuba khange uphazame?
$ ./minerd -url stratum + tcp: //dogeu.nut2pools.com: 5585 -userpass user.worker: iphasiwedi
Khumbula ukuba kukho i -url kunye ne -userpass arguments
kwiphepha lobhaliso udale umqeshwa wakho ngendlela eyiyo? Ndiyenzile ngaphandle kwengxaki
Imigodi ... enkosi ngegalelo.
wow imali eninzi
loo doge yenza inzuzo kakhulu
ke wow wow
KwiArch Linux ufumana iphakheji kwi-AUR.
Isifundo esigqwesileyo ngoku ngalo lonke ixesha ndifuna ukuqala ukumbiwa kwemigodi kwakhona kufuneka ndenze ngalinye lala manyathelo okanye ndiqale phi.
kwaye ndingathenga ntoni ngale mali ye-crypto?
Kutshintshiselana nge-bitcoins, ungatshintshisa ii-bitcoins ngeedola okanye kwezinye iindawo onokuzisebenzisa.
Ukuba ufuna ukuphinda uye emayini kwakhona uya kwifolda, yenza isikrini kwaye ubhale umyalelo omde obandakanya umsebenzisi wakho, umsebenzi wakho kunye negama eligqithisiweyo lomsebenzi.
Uyivelisa njani idilesi yoluntu?
Ithini idilesi yemali?
Phendula kwi snock
UAllan herrera sitsho
Uxolo, kodwa ikhonkco kwiphepha lokubhalisa alisebenzi, ngaba umntu othile angandidlulisa i-URL NDICELA?
UWILLIAM E BANKS sitsho
Ndiyakholelwa ukuba olu lwazi luphelelwe lixesha kwaye / okanye ii-nut2pools «indawo» ifile! Uhlaziyo luyamangalisa kodwa ukuba ii-nut2pools «indawo» azisekho ndicinga ukuba inqaku liyashukuma!
Phendula UWILLIAM E BANKS
ExMplayer: Isidlali seMultimedia ngenkxaso ye3D, iFacebook kunye nokunye
AjudaLinux! Inguqulelo 0.2.0!